လျှာကင်ဆာအကြောင်း တစေ့တစောင်း - Hello Sayarwon
ကင်ဆာရောဂါများ » အခြားကင်ဆာများ
Update Date ဩဂုတ် 15, 2020 .2mins read
ကင်ဆာဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပေါ့။ ကုသပျောက်ကင်းဖို့ခက်သလို အသက်အန္တရာယ်လည်းစိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ခံတွင်းမှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ခံတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လျှာကင်ဆာအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ လျှာကင်ဆာက တကယ်ရောရှိလို့လားလို့တွေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကသေသေချာချာရှင်းပြပေးနိုင်မှာပါ။
လျှာကင်ဆာဆိုတာက ခံတွင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုးပေါ့။ ဆဲလ်တွေက ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအထိ ကွဲထွက်ရာကနေ အကျိတ်တွေဖြစ်လာတတ်တဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုးပါ။ ဒီကင်ဆာက လျှာအရှေ့ပိုင်း၊ လျှာအဖျားမှာဖြစ်တတ်သလို လျှာအနောက်ပိုင်း (လည်ချောင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာ) မှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လျှာအရှေ့ပိုင်းမှာ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါ စကားပြောရခက်ခဲပြီး လျှာအနောက်ပိုင်းမှာ လျှာကင်ဆာဖြစ်မယ်ဆိုရင် အစားအစာမျိုချရခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ လျှာကင်ဆာကဖြစ်ခါစမှာ သတိပြုမိခဲကြပြီး လည်ချောင်းထဲက ပြန်ရည်ကျိတ်တွေဆီ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကူးစက်လာချိန်မှ ကင်ဆာခံစားနေရပြီဆိုတာကို သိတတ်ကြပါတယ်။
လျှာကင်ဆာက ကလေးတွေမှာဖြစ်ခဲပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လျှာကင်ဆာကဖြစ်ခဲတဲ့ ကင်ဆာတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။
လျှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါ အခုလို လက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
HPV (လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ရောဂါပိုး) ကူးစက်ခံရတာ
သွားကြိတ်တာ တွေကြောင့် လျှာကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လျှာကင်ဆာရှိ၊မရှိသိဖို့ ဆိုရင် ဆရာဝန်က ခံတွင်းကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ X-rays ရိုက်တာ၊ CT Scan ရိုက်တာတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ရှုးစယူပြီး စစ်ဆေးတာမျိုးလုပ်ပြီး ကင်ဆာအခြေအနေကို သုံးသပ်ရပါမယ်။
ကင်ဆာဆေးတွေပေးမယ် စတဲ့ကုထုံးတွေကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေကိုလိုက်ပြီး ကုထုံး ကကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုတွေက သင့်ကို အစားဝါးစားနိုင်အောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီး လျှာလှုပ်ရှားမှုကောင်းစေဖို့နဲ့ မျိုချရလွယ်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာပါ။ စကားပြောရတာလည်း ပိုကောင်းလာစေမှာပါ။ ဒီကုထုံးတွေ ခံယူပြီး သက်သာသွားပြီးဆိုရင်တောင်မှ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေဖို့တော့လိုပါမယ်။
ရောဂါတိုင်းကို ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လျှာကင်ဆာမဖြစ်စေဖို့အတွက်
၆ လတစ်ကြိမ် ခံတွင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပါ
သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများစားပေးပါ။
What are the early signs of tongue cancer?https://www.medicalnewstoday.com/articles/322519.php Accessed Date 1 August 2019
Everything You Need to Know About Tongue Cancerhttps://www.healthline.com/health/oral-cancer/tongue-cancerAccessed Date 1 August 2019
Tongue Cancer Factshttps://www.webmd.com/cancer/tongue-cancer-facts#1Accessed Date 1 August 2019
အမွေးထူပြီး မဲနေသော လျှာ
ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေက အရေးပေါ် ကုသမှုလိုတဲ့ လက္ခဏာတွေလဲ။
ဘယ်လို လက္ခဏာမျိုးတွေက အရေးပေါ် ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုအပ်တဲ့ လက္ခဏာတွေလဲ။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးဆို အိမ်မှာ စောင့်မကြည့်ဘဲ ဆေးရုံကို သွားသင့်လဲ။
အခြေခံကျန်းမာရေး, ရောဂါလက္ခဏာများ စက်တင်ဘာ 13, 2021 .2mins read